Izizathu Zokuba Abantu Bangamthandi UThixo​—Kutheni Uziva Ukude KuThixo?
FUNDA NGOLUNYE ULWIMI ISepedi ISpanish Isi-Iloko Isi-Indonesia Isi-Itali IsiAlbania IsiAmharic IsiArabhu IsiArmenia IsiAymara IsiBhulu IsiBicol IsiBislama IsiBulgarian IsiCatalan IsiCebuano IsiChichewa IsiCreole saseHaiti IsiCroatia IsiCzech IsiDangme IsiDanish IsiDatshi IsiEfik IsiEstonia IsiEwe IsiFinnish IsiFrentshi IsiGa IsiGeorgia IsiGreenland IsiGrike IsiGuarani IsiHiligaynon IsiHungary IsiJamani IsiJapan IsiKazakh IsiKikuyu IsiKiluba IsiKinyarwanda IsiKirghiz IsiKirundi IsiKorea IsiLingala IsiLithuania IsiLuo IsiMalagasy IsiMaltese IsiMyanmar IsiNgabere IsiNgesi IsiNorway IsiNzema IsiOromo IsiPangasina IsiPapiamento (saseAruba) IsiPapiamento (saseCuraçao) IsiPhuthukezi IsiPolish IsiQuechua (saseBolivia) IsiRashiya IsiRomania IsiSango IsiSerbia IsiSerbian (saseRoman) IsiShona IsiSinhala IsiSlovak IsiSlovenia IsiSranantongo IsiSuthu (Lesotho) IsiSwahili IsiSwedish IsiTagalog IsiTahiti IsiThai IsiTigrinya IsiTshayina SaseMandarin (Esenziwe Lula) IsiTshayina SaseMandarin (Esiqhelekileyo) IsiTsonga IsiTswana IsiTurkish IsiTwi IsiUkrainian IsiUrdu IsiUruund IsiUzbek IsiVietnam IsiWayuunaiki IsiXhosa IsiYoruba IsiZulu isi-Igbo
Izizathu Zokuba Abantu Bangamthandi UThixo
“ ‘Uze umthande uYehova uThixo wakho ngentliziyo yakho iphela nangomphefumlo wakho uphela nangengqondo yakho iphela.’ Lo ngowona myalelo mkhulu nowokuqala.”—UYesu Kristu, ngonyaka ka-33. *
Abanye abantu bakufumanisa kunzima ukuthanda uThixo. Kubo uThixo akaqondakali, ukude ebantwini yaye ukhohlakele. Yiva nje ukuba abanye bathini:
“Nangona ndandithandaza kuThixo ndicela uncedo, wayengathi ukude kum. Ndandicinga ukuba akanazimvakalelo.”—UMarco waseItali.
“Nangona ndandifuna ngokunyanisekileyo ukukhonza uThixo, wayengathi akafikeleleki. Ndandicinga ukuba unguThixo ongqwabalala nothanda nje ukohlwaya abantu. Ndandingayikholelwa into yokuba unobubele.”—URosa waseGuatemala.
“Ndisengumntwana, ndandikholelwa ukuba uThixo usoloko ekhangela iimpazamo zethu kuba nje efuna ukusohlwaya. Ekuhambeni kwexesha, ndambona njengomntu ongenakufikeleleka. UThixo wayefana nomongameli ongenamdla kubantu abalawulayo.”—URaymonde waseKhanada.
Ucinga ntoni wena? Ngaba sinokukwazi ukumthanda uThixo? Kangangexesha elide amaKristu ebesoloko enalo mbuzo. Enyanisweni, kunyaka ka-500 ukusa malunga noka-1500, abantu abaninzi ababezibiza ngokuba ngamaKristu babengathandazi kwaukuthandaza kuThixo uSomandla. Ngoba? Babengcangcazela luloyiko xa becinga ngaye. Umbhali-mbali uWill Durant uthi: “Ebenokuthini umoni ukuthandaza kuThixo owoyikeka nokude kangaka ebantwini?”
Kwenzeke njani ukuba uThixo abonakale ‘njengowoyikekayo nokude ebantwini’? Ifundisa ntoni iBhayibhile ngoThixo? Ngaba ukufunda inyaniso ngoThixo kungakunceda umthande?
^ isiqe. 3 Mateyu 22:37, 38.